Knowledge Archives - Page 32 of 62 - Khitamyin
ပေါင် ၁၈၀ မှ ပေါင် ၁၂၀ ထိ ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့သူပြောပြတဲ့ ဝိတ်ကျနည်းလမ်းကောင်းများ
September 10, 2021Ko Khit0 Comments
ပေါင် 180 မှ ပေါင် 120 ထိ ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့သူပြောပြတဲ့ ဝိတ်ကျနည်းလမ်းကောင်းများ ပိန်သွားတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပါမယ် စာသိပ်မရေးတတ်လို့ အမှားပါသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ပထမဆုံးကိုယ်ဝိတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော် အရင်ကလည်း မပိန်ခဲ့ပါဘူး…
D Day ကြေညာဖို့အတွက် NUG က ဘယ်လောက်အထိ စွန့်စားခဲ့ရသလဲ
ဒီမနက် ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ PDF ညီလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီစာပို့ပါတယ်။ အစ်ကိုရေ ဒီနေ့ စပြီနော်၊ အစစအရာရာဂရုစိုက်တဲ့။ သူဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်တယ် NUG ၏ ယာယီသမ္မတဖြစ်သူ ဒူဝါလရှီးလ…
NUG ဘာကြောင့် D’Day စစ်ကြေညာရတာလဲ? ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသတင်း မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ မေးခွန်းနှင့် Dr.ဆာဆာရဲ့ အဖြေ
September 9, 2021Ko Khit0 Comments
Dr.ဆာဆာကို ကမ္ဘာ့နိူင်ငံရေးသတင်း မီဒီယာတစ်ခုက NUG ဘာကြောင့် D’Day စစ်ကြေညာရတာလဲ? ဒီမေးခွန်းကို Dr.ဆာဆာ ဒီလိုပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရက စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သံတမန်နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့တယ်…
ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်အောက်မှာ သွေးပျက်နေကြပြီ
အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲခေါ်လိုက်တယ် ။ ကြောက်တဲ့သူမရှိဘူး ။ excited ဖြစ်နေေကြတယ် ။ စစ်အာဏာဝါဒကို အမြစ်နုတ်ချင်နေကြတာ ကြာပြီမဟုတ်လား ။ အာဆီယံက အပစ်ရပ် လေးလ ကြေငြာချိန်မှာ တိုက်ပွဲခေါ်လိုက်တယ်…
ဒီဒေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အယူလွဲနေသူတွေအတွက် အသိပေး ရှင်းပြလာတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်
September 8, 2021Ko Khit0 Comments
ဒီဒေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အယူလွဲနေသူတွေ အတွက် အသိပေး ရှင်းပြလာတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည် ဒီဒေးက ကြောက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ကူရမှာ ဝယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ဝေရမှာ…
NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က ဒါမျိုးတွေပိုင်တယ် ဆိုတာ
ဟုတ်လို့လား …..လေ ပဲ မို့ လား တဲ့… ဦးရည်မွန်ရဲ့ပြောစကားကို အခြေခံပြီး…လေမို့လား လေမို့လား နဲ့…..သူ့လူရော ကိုယ့်လူရော လာမေးနေကြတာက…စိတ်ထဲ သဘာဝမကျတဲ့အထိ ဖြစ်ရတယ်။ စကစဘက်က NUG…
“တိုင်းမှူးတစ်ယောက်သာပါရင် စစ်ကောင်စီပြိုဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ” CDM ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး
တပ်မမှူးတွေ ၊ တိုင်းမှူးတွေအပါအဝင် တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ ပြည်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းကြဖို့နဲ့ စစ်ကောင်စီအောက်မှာ ကျွန်ခံမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြည်သူ့အစိုးရ၊ ပည်သူတွေ ဘက်မှာ ရပ်တည်မလားလို့ တော်လှန်ရေးနယ်မြေမှာ…
မြန်မာစစ်တပ် ရေရှည်ရပ်တည်ရေး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ် ပြော
မြန်မာစစ်တပ် ရေရှည်ရပ်တည်ရေး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ် ပြော အခုအချိန်မှာ အန်တီတို့အနေနဲ့ လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် မြန်မာစစ်တပ်က အခုချိန်မှာ ကြာရှည် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်…
ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွားရေး ပိုင်သမျှ မြေတွေကို ကျောင်းဆောက်ဖို့ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အာဖရိကမှ ဘုရင်မကြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အာရှဒေသမှာ အထွန်းကားဆုံးဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ နီပေါစတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ အာရှမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ ဆိုရမှာပါ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာဖရိကစတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ…
မျှော်လင့်နေကြတဲ့ D-Day နေ့ ..(ဒီနေ့) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပန်ဆယ်လို live လွှင့်၍ ပြောလာ(ရုပ်သံ)
September 7, 2021Ko Khit0 Comments
အောက်တွင် ရုပ်သံတင်ပေးထားသည်။ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ယနေ့ ပြောသွားသည့် မိန့်ခွန်း အကျဉ်းချုပ် (၁) ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်မှစ၍ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ခုခံတွန်းလှန်စစ်…
« 1 … 30 31 32 33 34 … 62 »
ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ – ချစ်သုဝေ
SAC က တပ်သားအသစ်စုဆောင်းဖို့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ညွှန်ကြား
နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အီသီယိုးပီးယား ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ စစ်ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ် တိုက်ခိုက်ဖို့ ရှေ့တန်း ထွက်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် အဘီ အာမက်က…
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒေါ်လာ ၇.၆၉၄ သန်း တန်ဖိုးရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတည်ပြု
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒေါ်လာ ၇.၆၉၄ သန်း တန်ဖိုးရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှစ်ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတည်ပြု ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ မှ CMP စနစ်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ…
ဘဏ်အသီးသီးတွင် အပ်နှံထားသော ငွေကြေးများ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြော
ဘဏ်အသီးသီးတွင် အပ်နှံထားသော ငွေကြေးများ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်ဟုဆို ပြည်သူများ ဘဏ်အသီးသီးတွင်အပ်နှံထားသောငွေကြေးများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် အခက်အခဲများရှိနေသော်လည်း အပ်ငွေများမဆုံးရှုံးစေရန် နစကအနေဖြင့်အာမခံကြောင်းနစကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြေဆိုထားပါတယ်။ သတင်းထောက်တစ်ဦးက ဘဏ်များတွင်အပ်နှံထားသောငွေကြေးများဆုံးရှုံးမည်ကို ပြည်သူများကစိုးရိမ်နေကြသည့်အပေါ် မဆုံးရှုံးစေရဘူးလို့အာမခံနိုင်ပါသလားဟုမေးမြန်းရာမှာ…